Ukuqonda iiRobes ezigqithiswe yiMondhist Monks neeNuns
Ingqwalaselo yeebhothi ezigqitywa yiMondhist Monks kunye namaNuns
Izambatho zabazonqulo bamaBuddha kunye namadongeni ziyingxenye yesithethe ebuyela emva kweenkulungwane ezingama-25 ukuya kwixesha leBuddha yembali. Iimonki zokuqala zazigqoke iingubo ezixutywe kunye kunye nezigubhu, njengokuba kwenza amadoda angcwele angamadoda aseIndiya ngelo xesha.
Njengoko iindawo ezihambahambayo zabafundi zikhula, uBuddha wafumanisa ukuba ezinye iilawula malunga nezambatho zaziyimfuneko. Ezi zibhaliswe kwiVinaya-pitaka ye Canan okanye i-Tripitaka .
UBuddha wafundisa iidonki zokuqala kunye nezindonga ukuba zenze iingubo zaso "ingubo" ecocekileyo, nto leyo eyayithetha intsimbi engabikho mntu ayifunayo. Iintlobo zengubo ecocekileyo zaziquka iingubo ezazikhengwa ngamagqabi okanye iinkomo, zitshisa ngomlilo, zityhalwa ngokubeletha okanye igazi lokuya esikhathini, okanye zisetyenziswe njengesigubungelo sokugubungela abafileyo ngaphambi kokutshisa. Iimonki zaziza kuhlamba iingubo kwiimfumba kunye neendawo zokutshisa.
Naliphina inxalenye yengubo eyayingenakunceda yayinqunyulwa, kwaye iingubo yahlamba. Yayibiwe ngokubiliswa kunye nemifuno - izilimo, iziqabunga, iintyatyambo, amaqabunga - kunye neziqholo ezifana ne-turmeric okanye i-safaroni, eyanika ilinen umbala ophuzi-oluhlaza. Le mvelaphi yegama elithi "ingubo yesafron." Ama-monks aseTheravada ase-Asia-mpuma ase-Asia ahlala enxiba izambatho zemibala e-spice-day, kwi-shades curry, i-cumin, ne-paprika kunye nokutshisa i- saffron i-orange .
Unokukhululeka ukwazi ukuba oonobumba bamaBuddha kunye namadongeni akasayi kukhanda iingubo kwiimfumba kunye neendawo zokutshisa.
Kunoko, banxiba izambatho ezenziwe ngendwangu ezinikelwe okanye zithengiwe.
IiRobes eziThathu kunye neZihlanu
Izambatho ezigqithwe yi-Theravada iimonki kunye namanci ase-Asia-mpuma ye-Asia namhlanje zicingelwa ukuba zitshintshwe kwiingubo zangaphambili ezingama-25 ezidlulileyo. Isambatho sineengxenye ezintathu:
I- uttarasanga iyona ingubo evelele kakhulu. Ngamanye amaxesha ubizwa nangokuthi ingubo ye- kashaya . Ingxande enkulu, malunga ne-6 ngeenyawo ezili-9. Inokuthi ihlanganiswe ukumboza zombini amahlombe, kodwa ngokuqhelekileyo ixutywe ukumboza ihlombe elingasekhohlo kodwa ushiye ihlombe elifanelekileyo kunye nengalo.
I- antaravasaka igugu phantsi kwe-uttarasanga. Ihlanganiswe ekoneni njenge-sarong, igubungela umzimba ukusuka enqeni ukuya emadolweni.
I- sanghati iyinxibo eyongezelelweyo enokuthi ihlanganiswe emzimbeni ongaphezulu ukuze ifudumele. Xa kungasetyenzisiwe, maxa wambi ihlanjwe kwaye idutywe phezu kwegxalaba.
Ingubo yomdongxongo yasekuqaleni yayineengxenye ezintathu ezifana neengubo zee-monks, kunye neengxenye ezimbini ezongezelelweyo, okwenza "ingubo ehlanu". Amanxiba agqoke umzimba ( samkacchika ) phantsi kwe-farasanga, kwaye baphethe indwangu yokuhlamba ( udakasatika ).
Namhlanje, izambatho zeTyravada zowesifazana zidla ngemibala enemizila, njengemhlophe okanye i-pinki, esikhundleni semibala emibala ebomvu. Nangona kunjalo, i-Theravada nuns ayinqabile.
Ngokutsho kweVinaya-pitaka, uBuddha wabuza umlungiseleli wakhe oyintloko u- Ananda ukuyila iprojekti yerayisi yokugqoka iingubo. U-Ananda wambethe iingubo zelinen emele iipilisi zerayisi zibe ngumzekelo ohlukaniswe ngamacwecwe amancinci ukumela iindlela phakathi kwama-paddies.
Kuze kube namhlanje, ezininzi izambatho ezigqithwe ziinduna zazo zonke izikolo zenziwe ngeengubo zendwangu edibene kunye kulo mzekelo wendabuko. Ngokuqhelekileyo iphethini yekholomu emihlanu, kodwa ngezinye izihlandlo ezisixhenxe okanye ezithandathu zisetyenzisiweyo
Kwisithethe seZen, umzekelo kuthiwa ubhekiselele "insimu engenasimo yokuzuza." Umzekelo unokucatshulwa njengemandala emele ihlabathi.
I-Robe Ihamba Emntla: I-China, Japan, Korea
UbuBuddha basasazeka e-China , ngokuqala malunga nekhulu le-1 CE, kwaye ngokukhawuleza bafumana ukungahambisani nenkcubeko yaseChina. EIndiya, ukutyhila elinye ipaliti kwakuphawu lohlonipho. Kodwa oku kwakungenjalo eChina.
Ngenkcubeko yaseTshayina, kwakuhlonipha ukumboza umzimba wonke, kubandakanywa iingalo kunye namagxa. Ukuqhubela phambili, iChina iyancipha ngakumbi kuneIndiya, kunye neengubo eziqhelekileyo zintathu azizange zinike imfudumalo eyaneleyo.
Ngenye ingxabano yamacawa, oothixo baseTshayina baqala ukugqoka iingubo ezinde kunye nemikhono eyayibekwe ngaphambili, ifana neengubo ezigqithwe ngabaphengululi baseTaoist. Emva koko i-kashaya (uttarasanga) yayifakwe kwisambatho sengubo. Imibala yeengubo yavuthwa ngakumbi, nangona iphuzi elikhanyayo-umbala okhangelekileyo kwisiko laseShayina - uqhelekileyo.
Ukongezelela, e-China iinkokheli zazingekho ngaphantsi kokuncenga kwaye kunokuba zihlala kwimimandla yase-monastic eyayinokwaneleyo kunokwenzeka.
Ngenxa yokuba abatsha baseTshayina bachitha ingxenye yemihla ngemihla benza imisebenzi yasekhaya kunye negadi, ukugqoka i-kashaya lonke ixesha kwakungeyona into eyenzayo.
Endaweni yoko, oothixo baseTshayina bembethe i-kashaya kuphela yokucamngca kunye nemikhosi yokugubha. Ekugqibeleni, kwaye kwaqheleka ukuba oothixo baseTshayina bembethe isambatho esahlukileyo-into efana ne-culottes-okanye ibhulukwe kwengubo engeyiyo yonke imihla.
Ukusetyenziswa kwesiTshayina kuyaqhubeka namhlanje eChina, eJapan naseKorea. Izambatho zemizi ziza kwiindlela ezahlukeneyo. Kukho uluhlu olubanzi lweziqwenga, ii-capes, i-obis, ii-stoles, kunye nezinye izambatho ezinxibe ngeengubo kule maMahayana.
Ngezihlandlo zemikhosi, iidonki, abafundisi, kunye namaxesha amaninzi ezikolweni ezininzi zihlala zimbethe ingubo "yangaphakathi", engafuthi imhlophe okanye imhlophe; iingubo zangaphandle zangaphandle, ziboshwe ngaphambili okanye zifakwe njenge-kimono, kunye ne-kashaya ehlanganiswe ingubo yangaphandle.
EJapan naseKorea, isambatho esingaphandle kwengubo yangasese ihlala emnyama, emdaka, okanye emhlophe, kwaye i-kashaya ibomnyama, ibomvu, okanye igolide kodwa kukho izinto ezininzi.
Amantombazana aseTibetan, amonki kunye ne-lamas banxiba iindidi ezininzi zeengubo, iinqwelo kunye neefestile, kodwa isambatho esisisiseko senziwe ngala ma candelo:
I- dhonka , ukufaka iikhati ngeemikhono ze-cap. I-dhonka i-maroon okanye i-maroon kunye nephuzi kunye nokubhobhoza okwesibhakabhaka.
I- shemdap yengubo ye-maroon eyenziwe ngendwangu eboshiweyo kunye nenani elifaniyo leempendulo.
I- chogyu yinto efana ne-sanghati, ukugoba okwenziwe kwiimfumba kwaye igqoke emzimbeni ongaphezulu, nangona ngamanye amaxesha idutywe phezu kwephepha elilodwa njengengubo ye-kashaya. I-chogyu iluphuzi kwaye igqitywe kwimikhosi ethile kunye neemfundiso.
I- zhen ifana ne-chogyu, kodwa i-maroon, kwaye yinto yokuqhelekileyo yokugqoka imihla ngemihla.
I- namjar inkulu kune-chogyu, eneentlanzi ezingaphezulu, kwaye liphuzi kwaye lidlalwa yilelika. Kungenxa yeziganeko eziqhelekileyo zesikhephe kunye nesitayela esingapheliyo, eshiya ingalo ephilileyo.
Ukukhangela UbuBuddha Bokuqala
I-Jataka Tale ye Hare engenabugovu
Kutheni 'Injongo Efanelekileyo' Kubalulekile eBuddhism
5 Iifrime zeSourf Best zihlala
Isiseko seScuba Diving: Izakhono kunye neMicandelo
Ubuncwane boBuchule kunye noNgcalulo: Ukususela kumbala woBuchule boBuchule
2009 US Open: Ukusinda kwiSlog kwiBetpage yaseBlack
Umtshato kaMark Zuckerberg kuPriscilla Chan uveza iziphakamiso zamaYuda
Indlela Ubulili Buhluke Ngayo KwiSondo